Ahoana Ny Fahitan’ny Shinoa Ny Faharesen’i Robert Mugabe, Ilay Naman’ny Fireneny Efa Taloha Ela Be Tao Zimbaboe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2017 16:27 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Português, Magyar, English
Nitsena ny filoham-pirenen'i Zimbaboe, Robert Mugabe, ny filoham-prenena Shinoa Xi Jinping nandritra ny fitsidihany ny firenena tamin'ny volana Aogositra 2014. Pikantsary avy amin'ny masoivohom-baovaom-panjakana Shinoa, Xinhua .
Raha nivondrona ireo hery politika sy ny tafika tao Zimbaboe hanesorana eo amin'ny fitondràna ilay Filoham-pirenena efa naharitra ela teo amin'ny fitondràna, Robert Mugabe, dia liana tokoa ireo Shinoa nijery ny dingana rehetra natao tamin'izany fanalàna teo amin'ny toerany ilay lehilahy izay voalazan'ny olona maro ho mpanao didy jadona izany.
I Mugabe, 93 taona , no nitondra an'i Zimbaboe nanomboka tamin'ny fahaleovantena azon'io firenena io avy amin'ny fanjanahan'ny firenena Britanika efa 30 taona mahery izao. Raha vao nanomboka nanome sazy an'i Zimbaboe ny ankamaroan'ny firenena Tandrefana rehetra noho ilay politikan'i Mugabe nangihy ny tany sy ny fanitsakitsahana ny zo mahaolona tamin'ny voalohandohan'ny taona 2000, dia niditra an-tsehatra ny Shinoa ary lasa mpanohana akaiky indrindra an'i Mugabe.
Nandritra ny taona maro, nihamafy nihamafy teny ny fifandraisan'i Zimbaboe sy Shina ka tonga hatrany amin'ny fampindramam-bola, fananganana sy famatsiana ara-bola ny tetikasa, ary fifampitsidihana ara-pomba diplaomatika. Teo anelanelan'ny taona 2010 sy 2015, nampindram-bola maherin'ny arivo tapitrisa dolara amerikanina.an'i Zimbaboe ny Shina.
Ny fanohanana ara-bola toy ireny mihitsy no nahatonga ny ankolafy mpanohitra ao Zimbaboe nanendrikendrika an'i Beijing ho mpiray tsikombakomba amin'i Mugabe sy nangalatra vola ann-davitrisa tao amin'ny firenena niaraka tamin'ny varotra tsy ara-dalàna tao amin'ny indostrian'ny diamondra. Ary, ny tena marina, nandritra ny fitondran'i Mugabe dia niharatsy hatrany ny toekaren'i Zimbaboe ary lasa tena olana goavana ny resaka kolikoly. Tamin'ny voalohandohan'ny volana Novambra, nesorin'i Mugabe tsy ho amin'ny toerany ny filoha lefitra, Emmerson Mnangagwa, tanaty hetsika iray toa nikendreny hametrahana ny vadiny, Grace Mugabe, hanray an-tànana ny fitondram-panjakana.
Ny 15 Novambra 2017, nitatra niharatsy hatrany ny toedraharaha rehefa noraisin'ny miaramila ny fitondràna ny firenena. Zimbaboeana an'arivony maro no nirohotra an-dalambe tao Harare renivohitra mba hankalaza sy nihirahira teny filamatra manohitra an'i Mugabe toy ny hoe “Tsy maintsy miala i Mugabe” sy ny hoe “Tsy manaiky ny fanjakan'ny taranak'i Mugabe”. Nanala an'i Mugabe teo amin'ny toerany maha-lehiben'ny antoko eo amin'ny fitondrana ny ZANU-PF, ka nanome ny toerany ho an'i Mnangagwa, ary nandrahona an'i Mugabe hanala azy eo amin'ny fitondrana raha toa ka tsy mety manala tena amin'ny maha filoham-pirenena azy izy.
Hatreto aloha, na nisy aza izany, dia mbola nandà ny hiala amin'ny toerany i Mugabe.
‘Tsy azo nianteherana ny namana antitra tahaka ireny’
Maro tamin'ireo haino aman-jery iraisam-pirenena no nametra-panontaniana ny amin'ny mety firaisan'i Shina tsikombakomba tamin'ny fanonganam-panjakàna tao Zimbaboe satria telo andro monja taorian'ny fiverenan'i Constantino Chiwenga , ilay lehiben'ny foloalindahin'i Zimbaboe, avy nitsidika an'i Sina dia efa nanomboka ny hetsika fanonganam-panjakàna nataon'ny miaramila.
Tao amin'ilay sehatra media sosialy malaza Weibo, dia maro ireo Shinoa mpiondana aterineto no namerina nilaza ihany koa io fomba fijery io:
Vao tafaverina avy any Shina ilay lehiben'ny mpanongam-panjakana, ary taoriana kelin'io fiverenany io no nitranga ilay fanonganam-panjakàna, ianareo hany no aoka hamintina azy.
Efa miha antitra ilay namana efa ela io ka lasa mora kokoa amin'ny vadiny ny mandrebireby ny sainy. Matetika manao fanakianana ratsy momba an'i Shina ny vadiny. Vao roa taona lasa izay, io namana hatry ny ela io ihany aza no nilaza fa i Shina no nahatonga an'io fahantran'ny toekaren'ny firenena io. Tsy azo itokisana ny namana tahaka izany. Olona nahazo diplaoma tao amin'ny Akademian'ny miaramila tao Shijiazhuang ireo olona vaovao.
Nanomboka tamin'ny taona 1960, nandefa ireo manamboninahitry ny tafika hanao fiofanana tany Shina i Zimbaboe ary araka ny tatitra voaray, nampiofanan'ny Tafi-Panavotan'ny Vahoaka Shinoa ihany koa ilay filoha lefitra teo aloha, Mnangagwa.
‘Fomba fijery Afrikanina iray momba ny famoretana ilay ‘Andian'olona Efatra’
Ankoatran'ny fiahiahiana ny fisian'ny fandraisan'ny Shinoa anjara tamin'ny fanonganam-panjakana, dia maro ireo mponina amin'ny aterineto no nahita fitoviana teo amin'ny zava-nitranga tany Zimbaboe sy ny teo amin'ny tantaran'i Shina tamin'ny — fisamborana ireo “andian'olona Efatra” izay nataon'ny tafika tamin'ny 6 Oktobra 1976, iray volana mialoha ny andro nahafatesan'ilay filoham-panjana fahiny Mao Zedong.
Jiang Qing, ilay vadin'i Mao farany indrindra no lehiben'io andiany io. Anisan'ny tena malaza indrindra ao amin'ny tranonkala Weibo ireto fanehoankevitra eto ambany ireto:
Io tranga io no niantombohan'ilay fomba fijery Afrikanina momba ny famoretana ilay Andian'olona Efatra.
Toy ny nilazana an'i Mao Zedong ho Ray nanangana ny Repoblika entim-bahoakan'i Shina, i Mugabe kosa noheverina ho mpitarika lehibe nanana anjara asa fototra tmin'ny fanesorana an'i Zimbaboe tamin'ny fanjanahana Britanika.
Na efa hita aza ny voka-dratsy teo amin'ny toekaren'ny firenena sy ny fanitsakitsahana ny zo mahaolona nitranga teo ambany fitondran'i Mugabe, dia mbola voafidy ho filohan'ny Firaisambe Afrikanina miisa 54 ihany izy tamin'ny 2015.
“Toy ny fonja ny firenena tsy anjakan'ny Demokrasia’
Maro ireo fanehoankevitra tao amin'ny Twitter no nilaza fa maneho ny herin'ny vahoaka ny fidarabohan'i Mugabe. Ohatra, nanoratra i @twiqiang08:
Norovitin'ny vahoaka tao Zimbaboe ny sary goavamben'i Mugabe, ilay fony taloha noraisina ho toy ny “mpitarika goavana, kapiteny goavana, mpampianatra goavana ary masoandro miloko mena”.
Fanamarihana: Rehefa tonga saina ny vahoaka, dia manjavona avokoa ireo “fahamboniana rehetra “, ho atsipy any anaty dabam-pakon'ny tantara ny mpanao didy jadona.
Ny famaritana ny hoe “mpitarika goavana, kapiteny goavana, mpampianatra goavana ary masoandro miloko mena” dia nampiasaina hamaritana an'i Mao Zedong. Vao haingana, taorian'ny kongresy nasionaly faha 19 an'i CCP , nanomboka niantso ny Filoham-pirenena Xi Jinping ho “mpitarika goavana” ny haino aman-jery sy ny gazety miara-miasa amin'ny fanjakana Shinoa ary nampiasa teny Shinoa mihoatra ny 15.000 mba hanazavana ny antony nilazàna fa “mpanamory sambo mahay tsy manan-tsahàla i Xi ary afaka hitondra an'i Shina any amin'io nofy ngezabe io”.
Tao amin'ny vohikala Weibo, nisy mpiserasera iray nanana ahiahy ny amin'ny mety hisian'ny fanamavainana ny “herin'ny vahoaka” satria matetika dia ny “vahoaka” no nanohana ireny mpanao didy jadona ireny ho tonga amin'ny toerana voalohany.
Mpitehaka sy mpankahery fotsiny ireo antsoina hoe “vahoaka”, mitovy daholo ny olona rehetra manerana izao tontolo izao. Fony tonga teo amin'ny fitondràna i Mugabe, nihoby azy izy ireo ary nandray azy ho toy ny mpanavotra. Taty aoriana anefa, navadik'izy ireo ho lasa mpanefoefo mpanambola an-davitrisa (noho ny fihenan'ny sandam-bola) ary niina ho 30 taona ny fahelàna velona raha toa ka 60 taona izany tany aloha. [Araka ny tatitry ny Banky Iraisam-pirenena, nidina ho 40 taona eo ny fahelàna velona ho an'ny vahoaka ao Zimbaboe tamin'ny taona 2002 sy 2003 raha toa ka 62 taona tamin'ny antsasaky ny andian-taona 1980. Tato anatin'ny taona vitsy lasa dia niverina ho 59 taona io tarehimarika io.] Amin'izao fidarabohany izao. mbola nihoby ihany izy ireo.
Saingy notsipihan'i @huangmeijuan, mpampiasa Twitter, fa voatery manaiky an'ireo mpanao didy jadona ireo vahoaka mirediredy ireo satria tsy misy toerana ho an'ny fandàvana izao:
Ankehitriny, ny teny filamatra toy ny hoe “Tsy maintsy miala i Mugabe”, “Tsy mila mpitarika goavana ny vahoaka” no mameno ny lalana tao Zimbaboe. Amin'izao fotoana izao, izay efa niala ilay mpitarika goavana, tsy mikorontana ary tsy anjakan'ny mpitarika ady akory ny firenena. Lasa nandositra ilay polisy tompon'andraikitra tamin'ireo famoretana famoriambahoaka teo aloha, tsy nisy sahy nipoitra mihitsy na iray aza. Toy ny fonja ny endriky ny firenena iray tsy anjakan'ny demokrasia ary toy ny mpiandry varavaram-ponja fotsiny ilay mpitarika goavana.
Nizara ny eritretriny sy ny faniriany tao amin'ny Twitter ireo teratany Shinoa mpanohitra ara-politika ireo momba ny mbola hahalavo izay mpitondra mpanao didy jadona manaraka eo. Nilaza i @BaiqiaoCh:
Mpanao didy jadona malaza iray indray no nidaraboka. Noterena hametra-pialàna i Mugabe, 93 taona, nandritra ny fanonganam-panjakana niseho tao Zimbaboe. Mifandray akaiky amin'ny antoko Kaominista Shinoa i Mugabe ary tamin'ny taona 2015 aza, dia nomena azy ny Loka'ny Fandriampahalemana “Confucian Peace Prize”. Iza no [mpanao didy jadona] manaraka hametra-pialàna hiala anaty fanonganam-panjakàna? I Kim matavy be ao Korea Avaratra ve sa i “Xi ilay mofo” avy ao Korea Atsinanana [izany hoe i Shina] ? Maniry mafy ny hitrangan'izany aho.